श्रीमतीको हत्या गर्ने यस्ता निर्दयी श्रीमान्
मकवानपुर । लोग्ने स्वास्नीको झगडा परालको आगो भनिन्छ । तर कहिलेकाही यसो नहुँदो रहेछ । दिनहुँजसो भइरहने झगडाले कसैको ज्यान जानसक्न भन्ने दुःखद स्थिती हेटौंडा उपमहानगरपालिकामा भएको छ । हेटौंडा ४ कर्रामा श्रीमानले श्रीमतीको हत्या गरेका छन् । ४२ वर्षकी मीना लामालाई ६३ वर्षीय श्रीमान रामबहादुर लामाले धारिलो हतियार प्रहार गरि हत्या गरे ।
मृतक लामाको दुई वटा सन्तान रहेका छन् । श्रीमान् श्रीमती दिनहँुजसो झगडा गर्ने गरेको स्थानीय बताउँछन् । श्रीमती हत्या गरेका लामा फरार रहेको प्रहरीको भनाई छ । संगै जीवन बिताउँने लोग्ने स्वास्नीको झगडा हुनुलाई सामान्य मानिन्छ ,परालको आगो जस्तो । हेटौंडामा भएको यो दुःखद घटनाले मकवानपुरमा ठूलै तरङ्ग उत्पन्न गरेको छ की झगडाले कहिले काही उग्र रुप लिँदा श्रीमान् श्रीमती नै भन्ने बिर्सादियो । कति कठोर मन श्रीमान्को ? कति निर्दयी बन्न सकेको आफ्नै श्रीमतीलाई मार्न सक्ने ? भन्ने खालका कुरा गर्दै मानिसले जिब्रो टोक्ने घटना भयो हेटौंडामा ।